Tricare Stafford Mabhawa Akwegura Chengetedza Residence - Chermside West - Qld
Real Estate Listings: » Commercial Real Estate » Hotels » AU » Tricare Stafford Mabhawa Akwegura Chengetedza Residence - Chermside West - Qld1
Type yemhando: Sale price
Zvimiro: Secure Access
Tricare Stafford Mabhawa Aged Care Residence - Chermside West - QLDWELCOME TO STAFFORD LAKESTradension nyaradzo inovandudzwa nehusarudzika hwekuchengetedzwa kwekugara panguva yedu yemazuva ano Stafford Lakes yekugara yemhuri, yakaderedzwa nemadimikira chete kunganzwisisa kwaizotarisira. Kupa hwakasiyana-siyana hwekuchengetedza kwekunyaradza uye hotera-chimiro pekugara, timu yedu yakazvitsaurira yevachengeti vechokwadi inozvipira zvakare pakuita kuti vagari vagovane mukudziya kumwechete zvisinei nemamiriro avo ezvinhu. Tinogamuchira mhuri uye shamwari dzinoshanyira vagari, nekurerukirwa kwepamhepo yakawanda yemahara uye nyore kutakura vanhu. Kwekugara kwedu kune mukurumbira-wakamira wekutarisira kwevakuru iwe waunogona kuvimba nawo. Relax, kuziva vadiwa vari mumawoko akanaka neProCare.Mazuvano, nyika-yeyekugara ine hotera-maitiro pekugara, masevhisi uye zviwanikwa zvinowanikaClose kuzvipatara, Westfield Chermside shopu yekutengesa uye Stafford City precinct. Co-inowanikwa neStafford Lakes Retirement Community, inoshanda kune vakaroorana vane pekugara uye vanotarisirwa zvinodiwa.Nzira yekutarisira kuStafford Lakes ndeyekuona kuti vagari vanowana mikana yezuva nezuva yekuita nzvimbo inosimudzira uye vane nzvimbo dzayo dzega kuti vambozorora. nepo isu tichipa hunhu hwekutarisirwa uye kutarisisa kuzadzisa zvido zvevanhu. Isu tinobatira iwo ese mazinga ekutarisira, kusanganisira vagari vane hutano hwakaomarara zvinodiwa, nevashandi vakadzidziswa zvizere uye nzvimbo dzakakurisa. Kushongedzwa kumba uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinogadzira nzvimbo dzinojairwa munzvimbo dzatinogara dzekugara dzichikurudzira vagari kuti vanzwe vari pamba, isu tichizopa mukana wekugara pakanaka. * Kutarisirwa kwekugara kune vagari vanosvika gumi nemana, yakavakirwa kubatsira izvo zvevakuru veAustralia sevavo. hupenyu hunoshandurwa * pekugara kune kamuri yekutanga imwechete, ine nzvimbo dzekudyidzana dzevakaroorwa * Makamuri evagari vese vane mweya mumwechete wakasarudzika kuitira kunyaradzo * Vavheti yekuwachira basa * Emergency yekufona system nevakoti vakanyoreswa saiti 24/7 * Kuwanikwa physiotherapy, podionze , diversional / occupational tiba, kutaura kurapwa, GP uye kwekudya / mishonga yekutengesa maResidents kuStafford Lakes vanogara munharaunda inobatsira, yemhuri-yemhuri uko hutano hwavo uye hutano hwakanaka huri pamberi pedu. Vashandi vedu vekutsiva vanogadzira sarudzo yakasarudzika yezvikafu zvinovaka, zvinonaka zvezuva nezuva, uye dzimba dzekudyira dzinova hushamwari munzvimbo dzekudya. Tine chirongwa chakazara chehupenyu chiitiko chinogadzirisa vagari pavanenge vari munharaunda medu, kana kushanya kunharaunda yakakura. Nzvimbo dzekunze uye dzekunze dzinosangana mumba medu dzatinogara dzinoshandisirwa zviitiko zvakakosha, uye nzvimbo dzakaita sehotera dzakanakira kusangana nemhuri kana neshamwari. * Chengetedza mavanze ealfresco ane akavharirwa ekunze kana ezvigaro zvemukati zvemahara zvine mahwindo akareba, ane mukurumbira munharaunda. kana kuungana kwemhuri * Kuveura bvudzi salon * Zviitiko zvetsika, makonsakiti, masevhisi ekuchechi, kudzidzira kurapwa magungano * Kudya * Yakadzika Danho Aged CareLOCATION * ZveMabhizimusi Zvekushanya
02 4963 xxxx Ratidza
Bata mushambadzi 02 4963 xxxx